I-townhouse enhle kakhulu endaweni yasemaphandleni, eduze neValencia - I-Airbnb
I-townhouse enhle kakhulu endaweni yasemaphandleni, eduze neValencia
Bugarra, Comunidad Valenciana, i-Spain
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Gloria
Imitha-210 Townhouse ngezindlela ezimbili, kulungisile ngokugcwele, nazo zonke Izinsiza, endaweni ethule futhi nazo zonke izinsizakalo, izitolo, izindawo zokudla, le Turia emfuleni, sidlula emzini munye okuyinto lungatholakala kokubili ngemoto nangezinyawo. Okuyinto iyimizuzu emi-5 ukusuka endlini, itholakala kumakhilomitha angama-40 ukusuka edolobheni laseValencia, maphakathi nemvelo, izintaba nomfula.
Indawo yemvelo, egezwe umfula iTuria esifundeni saseSerranos, indawo yolwandle oluhle kakhulu, enendawo yokudlela kanye nedamu lokubhukuda lomphakathi, emfuleni ngokwawo, izindlela zokuhamba izintaba zabathandi bemvelo, kanye nendawo yokudoba, phakathi kwezintaba.
Indawo yasemaphandleni, idolobha elithule kakhulu, kodwa ngazo zonke izinsizakalo, izindawo zokudlela, imigoqo, izitolo, ama-bungalows alungile emnyango wedolobha okuyindawo yokuhlala, ezungezwe izintaba, ukubukwa okuhle kakhulu.
Inombolo yepholisi: VT-48084-V
Hlola ezinye izinketho ezise- Bugarra namaphethelo